University of Oxford - Study in England, UK. Waxbarashada Europe
gaabinta : Oxford
aasaasay : 1096
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Oxford
Qor at University of Oxford
The University of dhismeedka kala Oxford ee, u dhashay ee ay taariikhda, waa il xoog.
Oxford waa jaamacad collegiate, oo ka kooban University dhexe iyo kulliyadaha. University dhexe ka kooban yahay qaybaha waxbarasho iyo xarumaha cilmi-baarista, waaxaha maamulka, maktabadaha iyo matxafyada. The 38 kulliyadaha waa is-maamula iyo dhaqaale ahaan madax banaan hay'adaha, kuwaas oo la xidhiidha University dhexe ee nidaam federaal ah. Waxa kale oo jira lix hoolalka joogtada ah ee gaarka loo leeyahay, kaas oo la aasaasay by Wayse Christian kala duwan oo weli hayn ay qof Christian.
The doorar kala duwan oo ka mid ah jaamacadaha iyo University ayaa waxaad fartaan Wannaagga muddo.
Dooro iyo galiyo ardayda undergraduate, dooro ardayda qalin ka dib markii ay qirtay by Jaamacadda.
Bixi hoy, cuntada, qolalka caadiga ah, maktabadaha, ciyaaraha iyo xarumaha bulshada, iyo daryeelka dhaqatada ah ee ardayda ay.
Ma ka masuul ah baridda tutorial for undergraduate.
Go'aansado content ee koorsooyinka gudahood oo waxbaridda college qaadataa meel.
Organises muxaadarooyin, siminaaro iyo shaqo shaybaar.
Waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah ilaha dhaqaale ee barida iyo barashada ee foomka of maktabadaha, laboratories, matxafyada, goobaha Kombuyuutarada, iyo wixii la mid ah.
Waxay bixisaa adeegyada maamulka iyo adeegyada ardayga bartamaha maamulo sida latalinta iyo shaqooyinka.
Qirtay iyo ilaaliyaa ardayda qalin, iyo baarayaa theses.
Dejiyo iyo baaritaan marks, iyo abaalmarinta degrees.
Nidaamka collegiate waa wadnaha ee guusha University ee, ardayda iyo aqoonyahano siinayo faa'iidooyinka labada si weyn ay leeyihiin, caalami ah hay'ad caan ah iyo in yar oo a, bulshada tacliinta maadooyinka. Waxay isu keentaa tacliinta sare iyo ardayda ee guud ahaan maadooyinka iyo kooxaha sano iyo dhaqanada iyo wadamada kala duwan, caawiyay inay kobciso hab xooggan maadooyinka in dhiiri badan oo guusha cilmi fiican of University iyo ka dhigaysa Oxford hoggaamiye ee beeraha aad u badan.
Kulliyadda Luqadda Ingiriisiga iyo Suugaanta
Kuliyada Luuqadaha, Philology & hodonimada Afkan
Shuclada ayaa Oxford Research Center ee Humanities ah
Kuliyada Qarniyadii iyo Modern Languages
Ruskin DUGSIGA OF Art
WAAXDA, History of Art
Kuliyada Theology iyo Diinta
xisaabta, JIRKA & NOLOSHA SAYNISKA DIVISION
Sciences Life Wajahadda Xarunta Tababarka Doctoral
DEPARTMENT OF cilmi barasho xayawaan
DEPARTMENT OF Qalabka
DEPARTMENT OF Sayniska Kombiyuutarka
CAAFIMAAD SAYNISKA DIVISION
DEPARTMENT OF Kiimikada noole
DEPARTMENT OF Psychology tijaabooyin
DEPARTMENT OF burada
Sir William Dunn DUGSIGA OF Pathology
NUFFIELD DEPARTMENT OF Caafimaadka Dadweynaha
NUFFIELD DEPARTMENT OF Sciences Qalliinka
NUFFIELD DEPARTMENT OF Medicine Clinical
NUFFIELD DEPARTMENT OF lafaha, Rheumatology iyo muruqyada Sciences
DEPARTMENT OF Farmashiga
NUFFIELD DEPARTMENT OF Sciences Health Care Primary
NUFFIELD DEPARTMENT OF neurosciences Clinical
NUFFIELD DEPARTMENT OF dhalmada iyo dumarka
DEPARTMENT OF Dhakhaatiirta
DEPARTMENT OF maskaxda
SOCIAL SAYNISKA DIVISION
ISKUULKA EE Anthropology iyo Museum Ethnography
DEPARTMENT OF Dhaqaalaha
BLAVATNIK DUGSIGA OF Dowladda
DEPARTMENT OF Relations Politics iyo International
ISKUULKA EE Qadiimiga
DEPARTMENT OF Waxbarashada
ISKUULKA EE Studies Area iskujir
Oxford-MAN Machadka tiro ahaaneed Maaliyadda
Ayaa sheegay Business School
Juqraafiga iyo Bay'ada
Siyaasadda iyo Bulshada Intervention
Sida jaamacadda ugu da'da weyn dunida Ingiriiska ku hadla, Oxford waa hay'ad gaar ah oo taariikhi ah. Ma jirto taariikh cad oo aasaas, laakiin waxbaridda jirey Oxford qaab qaar ka mid ah 1096 iyo si degdeg ah ka horumariyo 1167, marka Henry II ka dhigata jaamacadda Paris mamnuucay ardayda English.
In 1188, taariikhyahan, Gerald ee Wales, siiyey reading dadweynaha u Dons Oxford soo ururay iyo hareeraha 1190 imaanshiyaha Emo of Friesland, ardayga ugu horeysay ee loo yaqaan dibada, dhigay in mooshinka University ee dhaqan of links scholarly caalamiga ah. by 1201, Jaamacadda waxaa madax u ah Dugsiga ayaa Oxenford, kii horyaalka ee Chancellor waxaa shirka ku 1214, iyo in 1231 sayidyadiinna ah ayaa la aqoonsaday a jaamacad ama shirkad.
Qarnigii 13aad, rabshado u dhexeeya magaalada iyo goonnada (dayidiisii ​​iyo ardayda) dag abuuritaanka hoolalka heer hoose ah ay degan yihiin. Intaasu waa intii laga bedelay koowaad ee kulliyadaha Oxford ee, kaas oo bilaabay sidii 'hoolalka Dr Makumbe deggan’ ama ka fadilnaa guryaha iyada oo ay kormeerayaan of Master a. University, Balliol iyo Merton Kulliyadaha, kaas oo la aasaasay intii u dhaxaysay 1249 iyo 1264, waa kuwa ugu qadiimisan.
In ka yar hal qarni ka dib, Oxford ayaa gaari oo sarraysa ka kor mariyey carshigii kasta oo kale ee waxbarasho, oo ku guuleystay mahadda popes, boqorrada iyo nimankii by Samo falku inaad ah ay Qarniyadii hore, manhajka, cilmiga iyo mudnaanta. In 1355, Edward III ku aamaanay in Jaamacadda ay ka qayb qaateen qiimo waxbarashada; Waxa kale oo uu faallo ku saabsan adeegyada buriyay gobolka by Oxford qalin distinguished.
From maalmood hore, Oxford ahaa xarun dacwaddii noole, culimada ku lug muran diimeed iyo siyaasadeed. John Wyclif, Master 14-qarnigii of Balliol a, ololaynayey Bible ah in lahjadeed mucayan ah, soo horjeedo danaha reer Papacy. In 1530, Henry VIII qasbay Jaamacadda in ay aqbalaan uu furiinka ka soo Catherine ee Aragon, iyo inta lagu jiro toobadda ee qarnigii 16aad, ka churchmen Anglican Cranmer, Latimer iyo Ridley ayaa isku dayay, waayo, faasiqnimo iyo qurbaanno la gubo ku jirta ee Oxford.
Jaamacadda ayaa ahaa Royalist in Dagaalkii Sokeeye, iyo Charles anigu waxaan qabtay a counter-Baarlamaanka ee unkay House. Goor dambe oo qarnigii 17-, Faylasuuf Oxford ee John Locke, tuhunsan yahay khiyaamo qaran, ayaa lagu qasbay inuu dalka ka cararaan.
qarnigii 18aad, marka Oxford ayaa la sheegay in dekedda la dayriyey, waayo siyaasadda, sidoo kale wuxuu ahaa xilli scientific discovery and nooleenta diinta. Edmund Halley, Professor of Joometri, saadaaliyay soo laabashada dhagax xiddig magiciisa waxbay ushafeeci idanka; John iyo kulamadii ducada Charles Wesley ee aasaaska Society Methodist dhigay.
Jaamacadda ayaa la wareegay door hogaamineed xilligii Victorian, gaar ahaan muran diimeed. From 1833 wixii ka dambeeyey Movement Oxford wuxuu doonay inuu dib u soo nooleeyo dhinacyo Catholic Church ee ku Anglican. Mid ka mid ah hoggaamiyayaasheeda, John Henry Newman, noqday Roman Catholic ah 1845 oo markii dambe lagu sameeyey Cardinal a. In 1860 University Museum cusub wuxuu ahaa goobta doodda caan ah oo u dhexeeya Thomas Huxley, Kooxda heysata horyaalka ee horumar, iyo Bishop Wilberforce.
From 1878, hoolalka tacliimeed ayaa waxaa la aasaasay haweenka iyo waxay la dhigey xubin buuxda of University ee 1920. Shan kulliyadaha dhan-lab ugu horeysay qirtay in dumarka 1974 iyo, tan iyo markaas, kulliyadaha oo dhan ayaa qaynuunnadayda si ay u galin rag iyo dumarba bedelay. St Hilda ee College, taas oo asal ahaan ahaa loogu tala galay dumarka oo kaliya, ahaa kii ugu dambeeyay ee kulliyadaha galmo hal Oxford ee. Waxa uu qiray in rag iyo dumarba tan 2008.
Inta lagu guda jiro qarniyadii 21aad 20aad iyo horraantii, Oxford ku daray in ay muhiimka ah bini'aadamnimada awoodda weyn oo cusub oo cilmi-baaris ah ee sayniska dabiiciga ah iyo codsatay, oo ay ku jiraan daawo. In sidaas samaynaya, waxa uu wanaajiyey oo wuxuu u xoogaystay kaalinta u dhaqanka ah sida diirada caalami ah waxbarasho iyo gole doodo caqliga.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Oxford ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Oxford rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Oxford
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Oxford.